#Madagascar : Lozam-pifamoivoizana – Zandary nitondra môtô tafid itra tany ambany citerne? | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Lozam-pifamoivoizana – Zandary nitondra môtô tafid itra tany ambany citerne?
Zandary iray no niharan-doza teny Ambohimalaza ny sabotsy teo tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro. Tapaka ny tongony ary avy hatrany dia tsy nahatsiaro tena izy. Tsy misy atahorana anefa ny ainy, araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, omaly. Olona iray hafa niaraka tamin’ity zandary ity no tsy naratra.
« Teo amin’ny fiolahana iray eo Ambatolampikely-Ambohimalaza no nitrangan’ilay loza. Handeha hiakatra aty an-drenivohitra ireo mpitaingina môtô no nifanena tamin’irony fiarabe kamiao mpitondra solika irony. Tafasitrika tany ambanin’ilay kamiao mihitsy ilay môtô. Irony fiarabe irony rahateo, somary mangalatra havanana rehefa mihodina fiolanana », hoy ny zandary.
« Vokatry ny fandehanana mafy no nahatonga ilay loza satria niara-tafiditra teo amin’ilay fiolahana ny roa tonta. Raha nisy ny fandeferana, na teo amin’ny ankilany na teo amin’ny an-daniny dia azo nosorohina tsara izany », hoy Ramanamizaka Andrianina, isan’ireo nanatri-maso ny zava-nisy afak’omaly.